𝗛𝗜𝗥𝗗𝗔𝗡𝗞𝗔 𝗤𝗨𝗪𝗔𝗗𝗔𝗛𝗔 𝗔𝗗𝗨𝗨𝗡𝗞𝗔 𝗘𝗘 𝗚𝗘𝗘𝗦𝗞𝗔 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗢𝗢 𝗟𝗔𝗚𝗔 𝗖𝗔𝗕𝗦𝗜 𝗤𝗔𝗕𝗢 𝗜𝗡 𝗨𝗨 𝗚𝗢𝗕𝗢𝗟𝗞𝗔𝗡𝗜 𝗞𝗔 𝗗𝗛𝗔𝗟𝗜𝗬𝗢 𝗗𝗔𝗚𝗔𝗔𝗟𝗢 𝗖𝗨𝗦𝗨𝗕. | ToggaHerer
← Daawo: ” Dawlada Hoose ayaa gacanta ku haysa Nashaqdii cusubayd ee Suuqa Waaheen inta Dawlada Hoose hoos timaada.. kadibna dadka ayaanu la shiraynaa waayo Dadka kale hantida ay leeyihiin ayaa ka badan ta dawlada hoose xukunto”
Gurmadkii Abaaraha Gobolada Bari Oo Gabi Ahaanta Ay Xukuumadu Joojisay Iyo Shidaalkii Booyadaha Ay Iticmalayeen Oo Cirka Isku Shareeray? →
Published on April 12, 2022 by Oday
1- Muranka uu dhaliyey biyo-xidheenka Ethiopia ee GERD oo ka dhexeeya ETHIOPIA , SUDAN & MASAR kaasi oo aanu rabin dalka Ethiopia in qaramada midoobay galaan , halka EGYPT oo u aragta in doodeedu sharci tahay ku qanacsan tahay qaramada midoobay UN.
2- Waxa kale oo qaramada midoobay horyaalla arimihii binu-adenimada lidiga ku ahaa ee dagaalkii Tigray oo qaramada midoobay iyo dawlada maraykanku leeyihiin Ethiopia & Erateria cunoqabatayn halagu soo rogo maadaama ay gashay ficiladaasi xun-xun ee ay ka mid yihiin , Kufsiga , dilka iyo barakicinta dad aan waxba galabsan oo ay geysteen dawladahani.
1- Suuqiisa iyo muhiimada uu u leeyahay dawladaha warshadaha iyo wax soo saarka badan leh ( Geo-economic).
2- Goobta uu ku yaallo gobolku ( Geo-strategic ) oo muhiim u ah quwadaha iyo dawladaha aduunka xaga amaanka iyo istaratijiyada mustaqbalka.
3- Ahmiyada uu gobolkani u leeyahay hirdanka siyaasada aduunka ( Geo-politics ) oo aan looga maarmeyn in dalwaliba ka helo bugcad uu dego maadaama dano badani kaga xidhan yihiin Africa iyo Jasiirada carbeed oo uu Geeska Africa labadaba u yahay meel u muhiim ah .